Chikunguru 18, 2018 arun
3 Bitcoin kuchera yemakambani aikoshesa pa pamusoro $ 1b
Bitcoin Three kuchera makambani akabatana mazita “Nyati” - private Makambani kumukoshesa panguva pamusoro $1 bhiriyoni - kekutanga. Bitcoin kuchera yemakambani: Bitman, Kenani Creative uye Ebang vari pakati yemakambani ari mazita 130 Chinese Nyati, zvawanyora haana vasati yaiva zvizere cryptocurrency-akaisa yakasimba.
Chepamusoro soro wevatatu, Bitmain rinowanika pana rechi13 pachikwata chete iwe $10 bhiriyoni, pedyo nezvimwe chinozikamwa makambani akadai JD Logistics. The chepamusoro kunotevera ichangopfuura nhau zvinoratidza kuti Bitmain apedza munhu Series B kumativi mari kuti aigona kukoshesa yakasimba kumativi $10 bhiriyoni mberi vanokwanisa kutanga pachena chinopiswa (IPO). Zvichakadaro, Hurun anokoshesa muKenani uye Ebang panguva kumativi $3 bhiriyoni uye $1.5 bhiriyoni, zvichienderana zvakadaro.
Mastercard Files bvumidzwa kuti rikurumidze crypto kubhadhara
Mastercard, nyika yechipiri pakukura mutambi ari 2.2 tiririyoni Dhora kubhadhara chikamu, akapiwa US bvumidzwa kuti itsva romutoo rikurumidze cryptocurrency kubhadhara.
The kambani rinoti kuti cryptocurrencies vave nevakawanda kugamuchirwa vatengesi, retailers, basa rinobatsirwa, uye nezvimwe purveyors nhumbi uye mabasa, kubudiswa nguva anofanira kuva zvikuru anokurumidza. Mastercard akati “Processing nguva, maminitsi pari kumativi gumi, chinofanira dzichienderana kuti tsika Fiat muripo kwema izvo zvine kubudiswa nguva akayera mu nanoseconds.”
Decentralized guta anotangazve Australia wokutanga cryptocurrency rakatenderera
misa Chain & mari kambani Decentralized Capital akazivisa kushanda Australia yokutanga kutonhora okuchengetera rakatenderera nokuda digitaalinen zvinhu. “Australasia yokutanga insured cryptocurrency rakatenderera” akasikwa vaishanda pamwe inokosha nesimbi rakatenderera yakasimba. Stephen Moss, muvambi uye mutungamiriri Decentralized Capital, akasimbisa indasitiri kuti kudiwa akachengeteka uye yakavimbika crypto muchitokisi mabasa: "Uyu mhinduro inotevera chokutambudzika bhizimisi uye rinopa kuchengeteka zvechokwadi ... Haugoni Hack nzira yako kupinda yakachengeteka."
Pavaichengetwa basa rinopa vanoshandisa ayo mbune crypto mari dzavo vachishandisa kuchengeteka matanho kusanganisira CCTV zvichiongororwa, panyama ongororo, biometric kuzivikanwa, PIN Codes, aramu hurongwa uye moto masimba enyika. Achitaura pamusoro kukura crypto muchitokisi musika, ari partnering zvirambe zviripo rakatenderera kuti Director Janie Simpson akati: “Tiri kuramba kugamuchira mubereko kubva nemakasitoma kutsvaka mhinduro chitoro cryptocurrency.”
GMO itsva Internet kubhengi kuchagadzirisa kubhadhara pamwe blockchain
Japanese digitaalinen Services yakasimba GMO Internet achangobva yakatanga itsva padandemutande kubhengi kuti panoti achashandisa blockchain kuti zviite mari. The “rinotevera-chizvarwa” mubhengi akati zviri kushanda pamwe GMO Internet “kukudziridza matsva kugarwa gadziriro utilizing blockchain Michina… pane kuwedzera netarisiro Zvinhu kuti njodzi uye isingadhuri kubhadhara uye mabasa zvemari.”
The sangano itsva - vaimudana GMO Aozora Net Bank - ndehwokuti kugovera mabasa matsva nemari kuburikidza kusangana pakati fintech uye IT, uye achaita zvireruke yemhando akachengeteka certificate, misa cheni, chakagadzirwa uchenjeri uye neindaneti zvinhu, maererano gwaro.
Billionaire Marc Lasry anoona Bitcoin richisvika $40,000 sezvo zvinova zvikuru uye nyore kuchinjanisa
Mutengo Bitcoin aigona kusvika kusvika $40,000 sezvo anova zvikuru uye nyore kutengeserana, billionaire investor Marc Lasry akati neChitatu. Lasry akati: “Sezvazvakanyorwa anowana kuzopindazve choruzhinji, uye sezvo zvakawanda misika vanoguma kuubvumira kuchinjanisa kupi pachena tradable, kwandiri kuti kupfuura bheji,” achiwedzera anoona Bitcoin vanoita kuita 5 kuti 10 nguva mari yavo 3 kuti 5 makore.
Lasry anotarisira Bitcoin achava tinyatsobatsirwa kuti makambani ose cryptocurrencies, vachiti “chikonzero nei Ndinofarira Bitcoin iri nokuti mumwe munhu wose ari kuuya.”
Kraken Daily Market Mushumo 17.07.2018
$203M vaitengerana mhiri misika zvose nhasi
tenga, tengesa, what should be done...